Gịnị bụ gị PROskore? | Martech Zone
Sunday, December 18, 2011 Douglas Karr
Enwere otutu ije na-eme ugbu a na akara ụlọ ọrụ. Echere m Klout enwetatụbeghị a bit nke na-adịbeghị anya… ọ siri ike ịbụ onye mbụ Ihọd na ngọngọ n'ọhịa ọ bụla. Enwere m ekele na mmadụ weere ọrụ siri ike nke ịmepụta akara ikike mbụ na ụlọ ọrụ ahụ, n'agbanyeghị, ma nwee olile anya na ha nwere ike ịmegharị algorithms ha ma nọgide na-azụlite ha.
Otu n'ime ndị asọmpi m hụrụ na-akpụ akpụ bụ Proskore. Algọridim ha abụghị sọsọ na akparamagwa (dịka Klout dị ka ọ dị), etinyere ya na netwọkụ, ahụmịhe na njikọ. A bụ ihe a video na-akọwa PROskore:
PROskore na-agbakwunye atụmatụ mara mma ọzọ… ikike iji dakọtara ndị na-eweta ya na ndị na-eweta ngwaahịa na ọrụ. Y’oburu n’acho okachamara SEO, sistemu a nwere ike ichota onye n’agha nke oma ma odighi ala di nso. Nke a dị mma… na-enye gị ohere chọta ndu ma chụsoo ohere ndị dị nso, ma ọ bụ ịchọta talent gburugburu gị.
N'uche nke m
Enwere ntụpọ na "Ọkachamara Ọkachamara" dị ka nke a, agbanyeghị, na nke ahụ bụ na ọ na-atụle nke ukwuu na njikọta nke mmadụ. E nwere ọtụtụ puku PhD na-arụ ọrụ n'azụ ọnọdụ na ụlọ ọrụ dịka Google, Apple na Microsoft ugbu a bụ ndị na-egbukepụ egbukepụ, na-agbanwe ụwa kwa ụbọchị, mana etinyela onwe ha n'ebe ahụ mmekọrịta. Ekwenyere m na akara a, dịka ya na ndị ọzọ, na-aga n'ihu na-ehichapụ elu kama igwu ala.
Ndị a scorking algọridim kwụghachi ndị na-emegharị ihe ụgwọ ma taa ndi nabatara ihe ntaramahụhụ ahụhụ. Nke bụ eziokwu bụ, anyị niile enweghị ike ịbụ extroverts… na ụlọ ọrụ chọrọ ma ọ bụrụ na ha ga-aga nke ọma. Yabụ, maka oge dị mkpirikpi, echere m na ngwa ndị a dị egwu dị egwu maka anyị bụ ndị na-achọ cha cha. M ga-adọ aka ná ntị azụmahịa ndị na-adabere ahịa ha ma ọ bụ na-akpọsa mkpọsa na nke ọ bụla n'ime akara ndị a n'oge a ma ọ bụrụ na ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị abụghị butterflies. Jiri akara ebe ha nwere nghọta!
M na-enwe mmasị na PROskore, mana nkatọ ikpeazụ m bụ nke m nwere n'ọtụtụ algorithms. Ọ dị mma na ị na-enye ozi ebe m nọ ugbu a… mana ozi ahụ abaghị uru ruo mgbe ị gwara m ihe m ga-eme ya. Ọ bụrụ na PROskore dụrụ ndị mmadụ ọdụ ka ha nwekwuo njikọ, ahụmịhe karịa, ma ọ bụ nye nnukwu ndụmọdụ ọ bụla ọzọ, sistemụ ga-adịwanye ike karịa. Klout na-enye ụfọdụ nzaghachi… mana anaghị m ahụ ya na saịtị ha ọzọ.
O zughi iji gosi ndị mmadụ etu ha si akụ, kụziere ha ka esi eme ka ọ ka mma!
Tags: ikikekloutklout akaraonyinyeAkaraakaraisi algorithm
Steve Jobs: Elekwasị anya, Ọhụụ, Kere
Dec 28, 2011 na 2:24 PM
Ezigbo post Douglas. Dead nwụọla maka ụgwọ ọrụ ndị na-akwụghachi ụgwọ na ntinye. N'ezie, ọ bụ otu n'ime ihe mere anyị (PROskore) akara ndị mmadụ dabere na ọ bụghị naanị mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị na-eleba anya na agụmakwụkwọ na akụkọ ihe mere eme. Ekwenyere m na anyị bụ naanị ikpo okwu iji mee nke a…
Anyị na-amalite amalite… Daalụ maka mkpuchi ahụ!
Dec 28, 2011 na 2:45 PM
Bill - daalụ nke ukwuu maka ịkwụsị na ịnọgide na-arụ nnukwu ọrụ. Ana m atụ anya ịhụ ihe na-esote!